​बाल्यकालमा को कलाकार कस्ता थिए ?
Sat Feb 25, 2017 Studio Time: 17:23:23
हामी, कहिलेकाँही आफ्नै पुराना तस्बिरहरु हेर्छौँ । बाल्यकालका तस्बिरहरु हेर्दा झन् कति रमाईलो लाग्छ । उमेर जति ढल्किदैँ गयो, हरेक हिसाबले हामी आफैँलाई उती फेरिएको पाउँछौ । पुराना दिनहरुलाई, सम्झाएर फेरी मुहारमा खुसी थपिदिन्छ यस्ता तस्बिरहरुले । हामी आफ्नै पुराना तस्बिर हेर्न पाउँदा त यति दंग हुन्छौँ भने, हामीलाई मन पर्ने कलाकारका बाल्यकालीन तस्बिरहर हेर्न पायौँ भने कति गदगद हौँला ? हामी तपाईँलाई नेपाली चलचित्र क्षेत्रका केही कलाकार बाल्यकालमा कस्ता थिए ? उनीहरुको तस्बिर देखाउँछौँ ।
राजेस हमाल, नेपाली चलचित्र क्षेत्रका महानायक हुन् । सयौँ चलचित्रमा अभिनय गरी, दर्शकको मन जितेका हमालको जन्म सन् १९६४ मा पाल्पामा भएको हो । भानुभक्त मेमोरियल स्कूलमा कक्ष ८ सम्म अध्ययन गरेका हमालले चन्डीगढ विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी साहित्यमा डिग्री गरेका छन् ।
जल शाह, कुनै बेलाकी चर्चित अभिनेत्री हुन् । अहिले यस क्षेत्रबाट पलायन भएकी जलको कौशल अभिनय भने धेरैले बिर्सेका छैनन् । सन् १९८२ मा जन्मेकी उनले धार्मिक चलचित्र श्री स्वस्थानीबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेकी हुन् । ब्यापारिक चलचित्र जगतमा भने अभतार उनको पहिलो चलचित्र हो । उनी त्यसबेला मात्र १४ बर्षकी थिईन् । अहिले, परिवारका साथ अमेरीका बस्दै आएकी जल शाहले ५० भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेकी छन् ।
मनिसा कोईराला कलिउडसँगै बलिउडमा पनि चर्चित नाम हो । सुन्दर शारीरिक बनावट र कुशल अभिनय क्षमताका कारण उनका लाखौँ फ्यान छन् । नेपाली चलचित्र फेरी भेटौँलाबाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गरेकी मनिसाको पारिवारिक पृष्ठभुमी राजनीतिक छ । उनको पहिलो बलिउड चलचित्र चाँही सौदागर हो ।
दिपकराज गिरीलाई, नेपाली हाँस्यब्यङ्ग्यको क्षेत्रमा चिनाईरहनु पर्दैन । १२ बर्ष भन्दा लामो समयसम्म तीतोसत्य हाँस्य टेलीचलचित्र बनाएका दिपकले , छ एकान ६ जस्तो सफल चलचित्र नेपाली चलचित्र उद्योगलाई दिईसकेका छन् । उनी अभिनयसँगै, निर्देशन र निर्माणमा पनि पोख्त छन् । उनले बनाएको हाँस्य टेलीश्रृङ्खला तीतोसत्य १२ बर्षसम्म चलेको थियो ।
निता ढुङ्गाना, नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चलेकी नायिका हुन् । किशोरावस्थादेखि नै अभिनयमा लागेकी निता, नेपाली चलचित्र उद्योगमा सुन्दरी नायिकाको रुपमा चिनिन्छन् । उनले अभिनय गरेको चलचित्र नोटबुकको गाला रातै बोलको गीत निक्कै चर्चित बनेको थियो । ठूला पर्दासँगै , म्युजिक भिडियोमा समेत कुशल अभिनय गरिरहेकी नीताको कामका प्रशंसकहर धेरै छन् ।
निरु खड्का नेपाली अभिनय क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो । संखुवासभा, पुख्र्यौली थलो भए पनि उनको जन्म झापामा भएको हो । उनले पत्रकारितामा स्नातक गरेकी छिन् । चेतनामुलक नेपाली टेलिचलचित्र थोरैभए पुगीसरीबाट चिनिएकी निरुले, सानोपर्दासँगै ठूलो पर्दामा पनि काम गरेकी छिन् । चर्चित हाँस्यटेलीचलचित्र मेरीबास्सैमा उनले निभाएको, निर्मलीको चरित्र नेपाली दर्शकले खुब मन पराएका थिए । उनी चलचित्र, टेलीचलचित्रसँगै, म्युजिक भिडियोमा पनि राम्रो अभिनय गर्छिन् ।